Doorashada xildhibaanada aqalka sare ee Somaliland kasoo jeeda oo Muqdisho ka bilaabmatay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDoorashada xildhibaanada aqalka sare ee Somaliland kasoo jeeda oo Muqdisho ka bilaabmatay
January 8, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
Doorashada xildhibaanada aqalka sare ee Somaliland kasoo jeeda oo Muqdisho ka bilaabmatay. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Doorashada xubnaha aqalka sare ee Somaliland u matali doona dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Axad ah ka bilaabmatay magaalada Muqdisho.
Ilaa iyo lix iyo toban (16) musharax ayaa doorashada maanta ku tartami doona lix kursi.
Somaliland ayaa ah maamul gobleedka kaliya oo doorashadooda xubnaha aqalka sare ay harsanyihiin. Waxay ku leeyihiin kow iyo toban kursi (11) xubnaha aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya.